Propellar cover - China J na K auto ngwa
Boat propela cover eluigwe na ala a na-waterproof propela cover bụ maka dum nchedo propela nke outboard engines mgbe ebu, fluorescent oroma agba. Anyị nwere nkesa na UK, bụrụ na ị na-na ahịa, biko kpọtụrụ anyị maka nkọwa kọntaktị, daalụ. Ọ bụrụ na ị nwere ihe ọ bụla metụtara na-ekesa a ngwaahịa si Europe, biko kpọtụrụ anyị, anyị ga-enwe obi ụtọ na-enye gị J na K auto-ngwa bụ emeputa maka akwa akwa ngwa si 2009, na-arụ ọrụ na Ferrari na Po ...
Boat propela cover eluigwe na ala
Nke a waterproof propela cover bụ maka dum nchedo propela nke outboard engines mgbe ebu, fluorescent oroma agba.
J na K auto-ngwa bụ emeputa maka akwa akwa ngwa si 2009, na-arụ ọrụ na Ferrari na Polo moto etc karịrị 5 6 afọ na ha customizing ngwaahịa, anyị nwere ihe karịrị 50 ọrụ, ha na-ọkà na ahụmahụ na akara karịrị 5 na 10 afọ , anyị na-nganga nke na-enye mụ na obi mma.
Previous: engine cover
Osote: magnetik ụdị a